Usuku My Pet » 6 Imibuzo Imibhangqwana Okufanele Cabanga Ngaphambi Ukuthola A Pet
Igcine ukubuyekezwa: uJan. 19 2021 | 3 imiz ufunde
Zibone it: Usumtholile umuntu ekhethekile, futhi ubuhlobo bakho kumnandi. Kodwa yini wena ongayenza uma ephawulekayo ezinye yakho kusikisela ukuthatha eqa futhi ukuzibophezela komunye nomunye…ngokuthola isilwane? Ngaphambi wengeze inja omusha noma cat ezimpilweni zenu, cabanga ukugcina imibuzo elandelayo engqondweni.
"Ingabe sobabili sifuna isilwane?"
Ukuba isilwane ekuphileni kwakho kungaba nomvuzo nokuphila-kokuqinisa. Kungaba eqolo futhi isikhathi esiningi, ne ASPCA kulinganiswa inja naphakathi kungadla avareji $1,580 ngonyaka ukudla, izindleko wezilwane, nezinye ukunakekelwa, kanti ikati kungadla avareji $1,035 ngonyaka. Isinqumo ukuthola isilwane kufanele mutual, futhi kufanele kwenziwe eside ngaphambi kwakho empeleni wengeze inja, cat, noma esinye isilwane ekuphileni kwakho. Khumbula ezinye yakho ephawulekayo angase abe madolonzima abe isilwane; uma kunjalo, inhlonipho umbono wabo futhi ucabangele ebambe liletha ekhaya isilwane esisha. Uma kungaba yini seluvele isilwane, ke kufanele ucabangele izidingo isilwane sakho lapho enza isinqumo.
"Luhlobo luni lwesilwane sasendlini kulungile kithi?"
Uma afanekisela ngoMgqibelo ekuseni jogs in the park nge Labrador, kodwa okuphawulekayo ezinye yakho abacabanga Stocking a tank omkhulu izinhlanzi, ke udinga ukukhuluma ngalokho uhlobo lwesilwane bafuna nobabili. Cabangela yimuphi komzimba wena noma ephawulekayo ezinye yakho babe, ubukhulu ophilayo isikhala sakho samanje, Umsebenzi wakho schedules, futhi izimali lapho sinquma isilwane. Sebenzisa leli thuba ukuze baxoxe ubukhulu pet ofuna, too. A Inja emikhulu kungaletha izinselele kanye nezindleko esingaphezu lap inja encane.
"Bangaki ezifuywayo esifuna, noma kunjalo?"
Nakuba kungenzeka wena kanye nezinye yakho ephawulekayo bavumelana uhlobo lwesilwane ufuna, udinga futhi ukuvumelana zingaki ezifuywayo ufuna. With ngamunye pet eyengeziwe, umthwalo wakho kanye nezindleko ezihambisana benakekela isilwane uyophinde ukwandisa. Khumbula iyiphi imithetho kanye nemithethonqubo ukuthi angasebenza mayelana bangaki izilwane ungaba, ikakhulukazi uma ngentela.
"Uzoba kuphi pet aphile?"
Ukuze eminye imibhangqwana, ukukipita akuyona inketho ngenxa yezizathu eziningi. Uma kanye nezinye yakho eziphawulekayo hhayi kokuhlala ndawonye, ke kudingeka unqume kuphi Fido noma Fluffy ngeke baphile. Ngokwesibonelo, ngeke yini banqume ukuyigcina isilwane sakho ekhaya umlingani wakho phakathi nesonto, usenabo the pet ngempelasonto? Uma sinquma ilungiselelo, factor emsebenzini wakho schedules nendlu wamanje noma ifulethi.
"Ngubani obangela for ukunakekelwa pet?"
Uma kanye nezinye izindleko zakho ephawulekayo njalo kuhlukana, ke sinquma ukuthi ubani obangele ukunakekelwa pet kungenzeka Moot. Nokho, uma ungathandi njalo ngokulinganayo kuhlukana izindleko, noma uma omunye kini kwenza ngokuphawulekayo kunabanye, ukunquma ukuthi ubani okufanele akhokhe izikweletu yokwelashwa for kanye nokudla pet yingxoxo kufanele nge ephawulekayo nezinye yakho ngaphambi ufika ekhaya a cat omusha noma inja.
"Uzoba kuphi sithola isilwane?"
Wena kanye nomlingani wakho kungenzeka bavumelana ukuthola olunye uhlobo oluthile lwesilwane. Kodwa uyobe uthole inja yakho entsha, cat, noma Hamster? Mhlawumbe omunye kini unemizwa enamandla mayelana ezifuywayo athengwe esitolo noma umfuyi. Uma kunjalo, nobabili kudingeka ukuba esikebheni Ngivuma mayelana lapho ungathola isilwane.
Ukuba ungaxoxi ngokukhululekile nendodana izilwane zakho ephawulekayo ezinye mayelana uhlobo nokuthi bangaki kuyisinyathelo esibalulekile ebuhlotsheni bakho. Khumbula ukuba qotho futhi uyayazisa imibono nomunye.